ပုဂံမျှော်စင်ကိုရောက်တုန်း ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။ ဆင်ပေါ်ရှိတဲ့ လူနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကိုပဲ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ မိန်းကလေးကတော့ ဘယ်မိဘုရားမှန်း မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချို့သော မြန်မာဘုရင်တွေက မိဘုရားတွေ များကြတယ်လေ။ ဥပမာ မင်းတုန်းမင်းကြီးပေါ့ :P
အနော်ရထာမင်းကြီးသာ အသက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မြင်နိုင်ကြားနိုင်မယ်ဆိုရင် သူ ၀မ်းသာနေမည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နှစ်စဉ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း မိန့်ခွန်းတွေပြောရင် သူ့အကြောင်းကို ထည့်ထည့်ပြောပြီး သူတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို အားကျပုံသွင်းချင်နေတဲ့ ရေဥာဏ်တော် စူးရောက်တဲ့ လူတွေကြောင့်ပါပဲ။
မိန့်ခွန်းတွေမှာ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်က အနော်ရထာ ဘုရင်တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း လေးရာကျော်က ဘုရင့်နောင် ကိုလည်းကောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်က အလောင်းဘုရား ဦးအောင်ဇေယျကိုလည်းကောင်း တသသ ဖော်ညွှန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။
သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ၅၉ နှစ်ကမှ ကျဆုံးကွယ်လွန်သွားသော လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမူ လုံးဝထည့်ပြော သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ လုပ်ကွက်တွေ၊ လုပ်ရပ်တွေကတော့ အော့ကျောလန်ချင်စရာတွေကြီးပဲ။
ကိုးကား - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုသတ်တာ ဘယ်သူလဲ
Thet Oo 7:57 am
ဟုတ်တာပေါ့။ I am totally agree with you. Haveanice easter holiday, Ko Chan!
CMS 11:41 am
thx for dropping by bro. Happy easter :)
စိုးထက် - Soe Htet ! 10:32 pm
Haveagood Easter Bro !